Solar DC Igwe ikuku oyi na ndị nrụpụta - China Solar DC Air Cooler Factory
ogbako ulo oru evaporative ikuku oyi China nwoke ...
High Performance Buy Air oyi - XK-75C Window des ...
Top Quality oyi oyi Fan - XK-75C Window desert ...
OEM China Solar Room oyi - XK-05SY Portable sola ...
Portable anyanwụ DC ikuku oyi XK-05SY
Anyanwụ bụ ume ọhụrụ gburugburu ebe obibi, XIKOO na-achụso teknụzụ ọhụụ na nchekwa nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi, mepụtara ma mepụta XK-05SY Portable solar 24v DC air oyi. na ọ bụ obere evaporative ikuku oyi, adaba ịkwaga na gbakwunye mmiri. Ezi Ọdịdị New ABS ...
obere anyanwụ desert DC ikuku jụrụ ofufe XK-06SY
Anyanwụ bụ ume ọhụrụ gburugburu ebe obibi, XIKOO na-agbaso teknụzụ ọhụụ na nchekwa nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi, mepụtara ma mepụta XK-06SY obere ọwụwa anyanwụ DC ikuku ikuku ikuku. na ọ bụ obere evaporative ikuku oyi, adaba ịkwaga na gbakwunye mmiri. Ọdịdị dị mma ...
Anyanwụ bụ ume ọhụrụ gburugburu ebe obibi enyi na enyi, XIKOO na-agbaso teknụzụ ọhụụ na nchekwa nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi, mepụtara ma mepụta XK-25 / 40C anyanwụ ike DC ikuku oyi. na ọ bụkwa window ụdị evaporative ikuku oyi, o nwere ikuku anwụrụ na ikuku diffuser, nwere ike arụnyere ...